बिहेको फोटो र भिडियो हटाउन मिडियालाई रिमाको दबाब ? – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/बिहेको फोटो र भिडियो हटाउन मिडियालाई रिमाको दबाब ?
फिल्मी फण्डा । २०७२ साल असोज १० गते आईतवार होटल ह्यात रिजेन्सीमा एक भव्य विबाह समारोह सम्पन्न भएको थियो । त्यो विबाहमा दुलही थिईन् नायिका रिमा विश्वकर्मा । नेपाली मुलका बेलायती नागरिक रोबर्ट विश्वकर्मासंग उनको विवाह सम्पन्न भएको २ बर्ष बित्न नपाउँदै सम्बन्धमा दरार आयो ।
जीवनको सुरुवाती दिनमा संचारकर्मीको रुपमा कार्यरत रिमाले आफ्नो पहिचान भने मोडलिङबाट बनाएकी थिइन् । त्यसपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो । उनको रोवर्टसंग सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत चिनजान भएको थियो । त्यही चिनजानलाई उनले प्रेम हुदै विवाहमा परिणत गरेकी थिईन् ।
विवाह पछि आफ्नो काम केहि हप्ताको लागी स्थगित गरेपनि आफु पुन मोडलिङ क्षेत्रमै फर्किने रीमाले जनाएकी थिईन् । अवस्था सोचेजस्तो भएन । तर २ बर्षमै विबाह कसरी टुट्यो ? रिमाले भने समझादरी हुन सकेन । दुबै मिल्न सकेनौं । त्यसपछि हाम्रो डिभोर्स भयो भन्दै आएकी थिईन् । रोबर्टले भने रिमाको बानी व्यहोरा राम्रो नभएको दाबी गरेका थिए । २०७४ मंसिर पहिलो साता यी दुईको डिभोर्स भयो ।
त्यसको लगतै रोवर्टले बर्षा रसाईली नामको केटीसँग इन्गेजमेन्ट पनि गरे । त्यसपछि रिमालाई राहत महशुस भयो । रोबर्टकै कारण डिभोर्स भएको अनुमान सबैले लगाए । त्यसपछि रिमा निरन्तर टेलिभिजको रियालिटी शो मै व्यस्त हुदै आएकी छिन् ।
बेला बखत म्युजिक भिडियोमा देखिने उनले सम्बन्ध विच्छेदको वारेमा प्राय मिडियामा खुलेरै आफ्नो धारणा राख्दै आएकी छिन् । सम्बन्ध विच्छेद पछि जीवन पूर्ण भएको बताउने रिमा खुशी रहेको समाचार र भिडियो लगातार सार्वजनिक हुदै आएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा उनको विबाह र सम्बन्ध विच्छेदको फोटो, भिडियो र समाचार खोजेजति पाईन्थ्यो । तर, केही दिन यता मुश्किलले मात्रै भेटिन्छ । यसको कारण हो रिमा विश्वकर्मा । पछिल्लो समय उनले विभिन्न मिडियामा कल नै गरेर आफ्नो विबाह र सम्बन्ध विच्छेदको फोटो, समाचार र भिडियो हटाउन दबाब दिएको बुझिएको छ ।
कतिपय युट्युबरलाई उनले तर्साएकी समेत छिन् । कतिपय मिडिया र युट्युबरले दबाब नभई अनुरोध आएको भन्दै फोटो र भिडियोहरु हटाईरहेका पनि छन् । विबाह को ५ बर्ष पछि अर्थात सम्बन्ध विच्छेदको तीन बर्ष पछि एका एक फोटो, भिडियो र समाचार हटाउन उनले किन दबाब दिईरहेकी छिन् कारण भने खुलाइएको छैन ।
स्रोतका अनुसार उनले आफ्नो छविलाई पूर्ण खाली र सफा राखेर विबाह गर्ने योजनामा रहेको बुझिएको छ ।जसका लागि उनले आफ्नो विगतको व्यक्तिगत सबै फोटो, भिडियो र समाचार हटाउन दबाब दिएकी थिईन् । कतिले पुरानो फोटो र भिडियोहरु हेर्दा उनलाई असहज भएको कारण हटाउन अनुरोध गरेको हुन सक्ने अनुमान लगाएका छन् ।
रिमाको व्यक्तिगत जीवन पनि नभएको हैन । तर, उनी सामाजिक पनि छिन् । किनकी उनी चर्चामा रहेकी नायिका हुन् । सेलेब्रेटीको वारेमा बुझ्न पाउनु र चासो राख्नु आम दर्शक तथा नागरिकको सूचनाको हक पनि हो ।
विबाहका बेला खुलमखुला फोटो र भिडियो खिच्न छुट दिएकी उनले प्रचारको लागि मिडियालाई समेत साधन बनाईयो । सम्बन्धविच्छेदको वारेमा सबै मिडियामा खुशीसाथ धारणाहरु व्यक्त गरेकी थिईन् । तर अहिले सबै प्रमाण हटाउन मिडियालाई दबाब दिनु उनको मूर्खता मात्र हो । किनकी रिमाले बुझेको हुनुपर्छ । मिडिया उनको इशारामा चल्ने कुनै साधान हैन, सूचनाको साध्य पनि हो भनेर । फोटो:इन्ष्टागाम, सामाजिक सञ्जाल र ग्लामर नेपालबाट